လူလိမ် koyintharaye သာအေးနှင့် ပတ်သက်၍ သဂျီးထံ တိုင်ကြားစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » လူလိမ် koyintharaye သာအေးနှင့် ပတ်သက်၍ သဂျီးထံ တိုင်ကြားစာ
လူလိမ် koyintharaye သာအေးနှင့် ပတ်သက်၍ သဂျီးထံ တိုင်ကြားစာ
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on May 1, 2011 in Aung San/Aung San Suu Kyi, Critic, Letter to The Editor | 11 comments
လူလိမ်လူကောက် နအဖလက်ပါးစေ သာအေး၏ ဧပြီလ၂၉ရက်နေ့စွဲဖြင့် တင်သော ဦးအေးမြင့် (လမ်းပြကြယ်)ဒေါ်စုထံပေးစာ…နှင့်…အသုံးမကျ(၅)လ ပို့စ်နှင့် ပတ်သက်၍ သဂျီးအား မေးမြန်းလိုပါသည်။ သူ၏ပို့စ်ထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက် အပုပ်ချထားပါသည်။ အထူးသဖြင့် နောက်ဆုံးအပိုဒ်တွင် အာဏာမက်သည်ဟူသော နိုင်ငံရေးထိုးနှက်ချက်အပြင် ဒေါ်စု၏ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် လင်ယောက်ျားဆုံးရှုံးရမှု၊ သားများနှင့်ပတ်သက်၍ လူမျိုးရေးစော်ကားချက်များကိုပါ အဆင့်အတန်းမဲ့စွာ ရေးထားပါသည်။ ထို့ပြင် အရင်ဘဝက မကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့ ယခုဘဝမှာ အိမ်ထောင်ရေးပျက်ဆီးရပြီး နောင်ကို ဒါထက်ဆိုးတာတွေနဲ့ပါ ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ ကျိန်စာတိုက်ထားတာကိုလည်း စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် ဖတ်ရပါသည်။ ပို၍ခွင့်မလွှတ်နိုင်သည်မှာ အဖွဲ့အစည်းများ အချင်းချင်း အမုန်းပွားစေရန် ရည်ရွယ်၍ အန်အယ်ဒီနှင့် အမြင်မတူသော မြန်မာအီးဂရက်အဖွဲ့ အမည်ကို ထင်ယောင်မှားဖြစ်စေရန် အသုံးချထားသည်ကို ထင်ရှားစွားတွေ့ရပါသည်။
ဧပြီ၂၉ရက်နေ့တွင် သဂျီးမှ ရှုပ်ထွေးမှုမရှိစေရန် ဦးအေးမြင့်၏ မူလစာဖြင့် ပြုခဲ့သော မှတ်ချက်ကို လူလိမ်သာအေးမှ “သူကြီးကျေးဇူးပါ…ရှုပ်ထွေးအောင်မလုပ်တတ်ပါ..သိစေချင်တာပါ
အခြေအနေမှန်ကိုသိမှ…ဖြစ်တော့မယ့်အချိမ်မို့ပါ” ဟု မျက်နှာပြောင်တိုက် တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ယနေ့ ဧပြီ၃ဝရက်နေ့တွင် သဂျီးမှ “ဆိုတာ.. Myanmar Egress မဟုတ်ပါဘူးလို့.. အီးမေးလ်ပို ့လာလို့ပါ..။
အဲဒါလေးရယ်..။ ဦးအေးမြင့် စာက အမှန်ပါပဲဆိုတာရယ်…. ရွာသားများ သိကြစေချင်လို့ပါ..။” ဟု နောက်ဆက်တွဲ မှတ်ချက်အနေဖြင့် ၎င်းပို့စ်တွင် တင်ထားပါသည်။
မန်းလေးဂေဇက်တွင် ယခုလို အခြားနာမည်ခံလိမ်ညာ၍ သူတပါးကို ယုတ်ညံ့ သေးသိမ်စွာ ရေးသားထားသည်ကို ထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်ပေးရန် တာဝန်ရှိ အယ်ဒီတာသဂျီး၏ အရေးမယူဘဲ ညှင်သာစွာ တုံ့ပြန်ပြီး နောင်ကိုဆက်လက် ကျူးလွန်ရန် တဖက်လှည့်နှင့် အားပေးနေသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်ကို လွန်စွာအံ့ဩဖွယ် ဖြစ်ရပါသည်။ သက်သေအထောက်အထား ထင်ရှားစွာရှိလျက်နှင့် လူလိမ်လူကောက် သာအေးကို အရေးယူမှု တစုံတရာ မရှိဘဲနေမည်ဆိုပါက မန်းလေးဂေဇက်တွင် အချက်အလက်မှန်ကန်မှု၊ သူတပါးအမည် ရယူသုံးစွဲမှု၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှု၊ ယုတ်ညံ့စွာစော်ကားရေးသားမှု စသည့် စာရေးသူများ စောင့်ထိန်းရမည့် အခြေခံ စည်းကမ်းချက်များ မရှိဘဲ လူတိုင်းအား ထင်သလို ရေးသားခွင့်ပြုသည်ဟု နားလည်ပါမည်။
၁- သာအေး၏ ဝန်ခံချက်ကို မြင်လိုပါသည်။
၂- သာအေး၏ ပို့စ်ကိုဖျက်ပေးစေလိုသည် (သို့မဟုတ်) သင်လျော်သော စာလုံးများဖြင့် ပြင်စေလိုသည်။
၃-၎င်းပို့စ်၏ မှတ်ချက်များကို မှတ်တမ်းအနေဖြင့် ဖျက်မရ ပြင်မရအောင် သင့်တော်သလို စီမံပေးစေလိုသည်။
၄။ သာအေးအား နောင်မမိုက်စေရန် သတိပေးချက်ထုတ်ပေးစေလိုသည်။
သဂျီးက အရေးမယူရင်လဲ .. သာအေးရဲ့ တင်ပြချက်တွေကို သပိတ်မှောက် မဖတ်ရင် သူ့အလိုလို ပျောက်သွားနိုင်ပါတယ် ..
တစ်ခုတော့ရှိတယ် .. သူ့လူတွေက ဝင်ဖတ်ပေးပြီး ကွန်မန့်တွေ ပေးမယ်ဆိုရင် (ပွဲကို ဆူအောင် လုပ်ရင်တော့) သဂျီးမှာ တာဝန်ရှိလာပြီပေါ့
သူများတွေလို မကောက်ကျစ်တတ်ရင်တော့ ..နောင်အကန့်အသတ်မရှိ ကြာစေလေသတည်း။
သာအေးအား မသေမချင်း သရေကွင်းနှင့် ပစ်သတ်ပေးရေး . . . . .ဒို့အရေး
ပုခုံးနှစ်ဖက်ကြားခေါင်းပေါက်၊ လူစာစား၊ လူလိုဝတ်၊ လူတွေကြားထဲနေပြီး . . လူစိတ်မရှိ၊ လူသားခြင်းစာနာစိတ်မရှိ၊ လူ့အဆင့်အတန်းယုတ်နိမ့်တဲ့ ဖေါ်လံဖား သာရာနား ၊ တစ်နပ်စားသမား လူ့အန္ဓ တွေကို ဟူစိန် လိုမျိုး ကြိုးကွင်းစွပ် သုတ်သင်နိုင်ရေး ကြိုးစားရမယ် . . . . လုံးဝ ခွင့်မလွှတ်သင့် သော လူကျင့်ဝတ်ဖေါက်ဖျက်သူများအဖြစ် အခြေခံသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေမှာ ထည့်သွင်း ထားရမယ် . .။
hninkharr … သားရေကွင်းနဲ့ ပစ်သတ်ရင် ဘယ်နှစ်ရက်လောက်အချိန်ယူပြီးမှ သေမလဲ သိချင်ပါတယ် …
ကိုယ်မကျွမ်းကျင်တဲ့နယ်ပယ်မှာတော့ ဝင်ပြီးတော့မ မရေးချင်ပါဘူး အမှားပါမှာစိုးလို့ပါ
ဒါပေမယ့်လည်း ရေးချင်စိတ်ကြောင့် ဝင်လာခဲ့တာပါ
ကိုရင်သာအေးရဲ့ ပို့စ်ကိုလည်း မဖတ်ဖူးပါဘူး အဲဒီအတွက် ဘယ်သူတွေကမှန်ပြီး မှားတယ်ဆိုတာတော့ မသိသလို …….
ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ တစ်စုံတစ်ဦးက သည်ပြသနာကို အားလုံးလက်ခံအောင်
ရှင်းပေးလိုက်ကြပါ အားလုံးပဲ အပျက်ပျက်ကနေ နှာခေါင်းသွေးထွက် ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ပါ